Ụbọchị My Pet » Winter Ụbọchị echiche
site Kim Lance
Winter Ụbọchị echiche
emelitere ikpeazụ: oké osimiri. 30 2020 | 3 min agụ
Na-ekpo ọkụ ụbọchị nke okpomọkụ nye ọnọdụ zuru okè n'ihi na-akpali akpali romance na fun n'èzí ụbọchị echiche, ma dị ka oge ịgbanwe na ifufe oyi bulie, Ọtụtụ di na nwunye nwere ike ịhụ ya ọzọ siri ike na-abịa na-akpali akpali ụbọchị echiche mgbe ya oyi, mmiri na-ezo, na, mgbe ụfọdụ, snowy n'èzí. Ebe a na-ise oyi ụbọchị echiche aka na-ndị na-ekpo ọkụ obi n'etiti gị na sweetie na-ere ọkụ ọbụna mgbe ọ bụ na-ekpo ọkụ na-abụghị.
Winter Ụbọchị Echiche #1: Skeeti Akpụrụ Mmiri
Kechie na scarves na uwe na-ewere onye gị na mpaghara ice rink n'ihi na ụfọdụ fun oyi oge mmega. N'ihi na oyi ihu igwe, gị na ndị ị hụrụ n'anya nwere ike kwụsịworo ụfọdụ n'ime na n'èzí ụbọchị omume nke ga-eme gị ọnụ n'oge okpomọkụ karị ọnwa. Adịghị enye on n'èzí-eme nanị n'ihi ya oyi. Ice iji atụrụ nwere ike ịbụ ihunanya (ijide aka, buru ya elu mgbe ọ dara) nakwa dị ka oké Ngagharị n'ezi.
Winter Ụbọchị Echiche #2: Christmas Light njuputa
Were uru nke niile nke ezumike ụlọ decorating n'oge Krismas site na-eme atụmatụ a ụbọchị ụgbọala gburugburu agbata obi gị na-achọ na Christmas ọkụ. Ị nwere ike na-ekpo ọkụ n'ime ụgbọala gị, na-ege ntị Christmas music ma ọ bụ ịhụnanya ndọrọ mmekọahụ so n'ìgwè na-eso ọṅụ nke gbaa udo ụlọ na-egbuke yi ọkụ na festive decorations.
Winter Ụbọchị Echiche #3: Snuggling Site The Fire
Ihe ọzọ bụ na ihunanya karịa achịkọta n'okpuru ụfọdụ na-ekpo ọkụ blanket n'ihu a na-enwusi ọkụ? Ọ bụrụ na ị nwere a usekwu n'ụlọ gị ma ọ bụ na ulo, eme ka a ụbọchị na onye gị na-eji ụfọdụ cuddle oge n'ihu a ọkụ. Ị pụrụ ime ka na-ekpo ọkụ chocolate na na-na-ekpo ọkụ ọkụ n'ụlọ ma ọ bụ, ọ bụrụ na ị na-enweghị ohere ka a usekwu na gị onwe gị n'ụlọ, gaa kafe ma ọ bụ ọnọdụ abalị n'ụlọ a usekwu na-eso a eji megharịa ọnụ na kọfị mgbe m nweere-ekpo ọkụ nke ọkụ.
Winter Ụbọchị Echiche #4: Ezumike Onyinye Ịzụ ahịa
Ezumike onyinye shopping nwere ike ịbụ a na-akpata nchekasị ọrụ, ma ọ dịghị ga-abụ. Ị nwere ike atụgharị gị ezumike onyinye shopping n'ime a fun na nwunye ọrụ. Ihe dị mkpa bụ idebe ya ìhè hearted. Atụmatụ a ụbọchị shopping na ọkacha mmasị gị ahịa ma ọ bụ ụlọ ahịa na etiti, na a nri ehihie na n'etiti iji ịnọ na-tụsaratụ a bit. -Aga n'ebumnobi nke na-eme nchọgharị na n'ihi na onyinye, atụtụ ihe ebe a ma ọ bụ n'ebe ahụ – adịghị aga na burukwa na-ahụ ihe niile ị na-achọ forÖthis pụrụ iduga nchegbu ma ọ bụ nchekasị. Jide n'aka na ị na-eme atụmatụ gị na ụlọ ahịa ụbọchị dị anya tupu nke mgbe ị ga-enye onyinye, nke mere na ị pụrụ oge gị mgbe ị na onye gị na anya gburugburu.
Winter Ụbọchị Echiche #5: Nwere a Snow Ọgụ
Kechie onwe gị elu na a arọ jaket, gaa saa gị snow akpụkpọ ụkwụ, na-anwa anwa n'èzí n'ime snow maka ụbọchị. Gị na ndị ị hụrụ n'anya nwere ike iwepụta ụbọchị
ụlọ snowmen, eme snow mmụọ ozi, na-enwe playful Snowball ịlụ ọgụ. -Enwe snow mgbe ị nwere ike, ọ dịghị arapara gburugburu nile n'afọ, ka emechara. Ọ bụ oké ụzọ iji nweta ihe omumu emesia i nwere ike isi èzí ruo ụfọdụ na-ekpo ọkụ koko.
Cheta, nanị n'ihi na ihu igwe amama oyi, ọ pụtaghị gị ụbọchị ga-atọpụ ha ịhụnanya. Ị nwere ike a na na na ihunanya oge na onye gị na ọbụna mgbe ọ bụ snowy, ọgba aghara, ma ọ bụ kejuru oyi. Were uru nke oyi ihu igwe na fun na snow na ice Skating, na-na-ekpo ọkụ n'ihu ọkụ, na-ekere òkè na ezumike eme ka ụlọ ahịa na Christmas ìhè ele anya na gị oyi bụ n'aka na-jupụtara na-ekpo ọkụ na nke obi ụtọ na-echeta na gị n'obi.
7 Mmekọahụ Eziokwu Ga-Fụọnụ Your Mind
10 Iwu Of dịwara N'ihi Women
5 Atụmatụ Iji Mee A Great mbụ Online dịwara echiche
9 AFỌ Onye ọ bụla Site San Francisco aga On